किन हुन्छ मधुमेह ? ८ लक्षण र बच्ने ८ उपाय – Rajmarg Online
किन हुन्छ मधुमेह ? ८ लक्षण र बच्ने ८ उपाय
मानिसले खाएको खाना शरीरभित्र ग्लुकोजमा परिवर्तन हुन्छ । मानव शरीरको प्रमुख शक्तिको स्रोत ग्लुकोज हो । शक्ति शरीरभित्र रहेका सेल्स (कोशिकाहरु) भित्र हुन्छ । ग्लुकोजलाई रगतबाट कोशिकाभित्र प्रवेश गराउने काम इन्सुलिन नामक हर्मोनले गर्छ ।
इन्सुलिन पेटको प्यान्क्रियाज भन्ने ग्रन्थीले उत्पादन गर्छ । यो ग्रन्थी रोगग्रस्त भएको अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा इन्सुलिन उत्पादन हुन सक्दैन । फलस्वरुप ग्लुकोज कोशिकाहरुभित्र प्रवेश गर्न नसकी रगतमै थुप्रिएर बढ्दै जान्छ र पिसाबबाट बाहिर निस्कन्छ थाल्छ।
यसमा इन्सुलिनको उत्पादन पर्याप्त मात्रामा हुँदैन र इन्सुलिनले उचित मात्रामा काम पनि गर्न सक्दैन । यसलाई इन्सुलिनमा निर्भर नरहने मधुमेह पनि भनिन्छ । यो मधुमेह नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यो करीब ९० प्रतिशत मधुमेह रोगीमा पाइन्छ । यो प्रायः ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसलाई देखिने भए पनि केहीलाई २० बर्षमा पनि देखिएको छ ।
यो मोटोपना र अस्वस्थकर जीवनशैलीबाट बढी हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यो मधुमेह केहीलाई वंशाणुगत कारणले पनि हुन्छ । यदि बंशजमा छ भने जीवनशैली परिवर्तन गरे केही हदसम्म यसबाट बँच्न सकिन्छ । यो ३० देखि ५० प्रतिशतलाई कुनै पनि लक्षण बिना नै देखिन सक्छ । शरीर कमजोर हुने, खुट्टा झमझम गर्ने, पिसाबमा कमिला लाग्ने, लामो समयसम्म घाउ निको नहुने यसका लक्षण हुन् । समयमै ध्यान दिए यो मधुमेहबाट बँच्न सकिन्छ । जीवनशैली परिवर्तन, शारीरिक व्यायाम, तौल नियन्त्रण, सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्ने, चिल्लो तथा नुनिलो कम गर्ने, तनाव नलिने र खानपानमा ध्यान पु¥याउँदा यसबाट बँच्न सकिन्छ ।